विश्वमा १% भाग्यशालीको हातमा मात्रै रहने गर्छ यस्तो चिन्ह ! यस्तो चिन्हले कसरि बनाउँछ मालामाल ! हेर्नुहोस् ! - BigulNews
विश्वमा १% भाग्यशालीको हातमा मात्रै रहने गर्छ यस्तो चिन्ह ! यस्तो चिन्हले कसरि बनाउँछ मालामाल ! हेर्नुहोस् !
असार ०७, २०७५ PS
आज हामी तपाईहरुलाई हातका रेखाअनुसार हुने भाग्यको बारेमा केही कुरा भन्न जादै छौँ। तपाईहरु यो कुरा जानुहोस कि हाम्रा हातका रेखाहरुले हाम्रा सम्बन्धको धेरै कुराहरु बताउने गर्छ । धर्मशास्त्र अनुसार,हामीले जीवनमा भोग्ने सुख ,दुखको बारेमा हाम्रा हस्त रेखाले बताउने गर्छ ।
तपाईहरु याद गर्नुहोस् कि तपाईका हातका रेखाहरु समयअनुसार बदलिने गर्छन । तपाईहरुको हातमा धेरै रेखाहरु हुन्छन र ती सबैले एक एक कुराको जानकारी गराउने गर्छ । आज हामी तपाईहरुलाई हातमा हुने एउटा यस्तो रेखाको बारेमा बताउन जादै छौँ जुन केही मानिसको हातमा मात्र रहने गर्छ । हातमा यो रेखा हुने मान्छेहरु साह्रैनै भाग्यमानी हुने गर्छन ।
साच्चैनै आज हामी तपाईहरु हातमा रहने यस्तो एउटा रेखाको देखाउनेछौ कि त्यो तपाईको भाग्यशाली निसाना बन्ने छ । त्यसैले जन्नुहोस यो कस्तो र कता हुन्छ ।
प्राय यो रेखा विद्वानहरूको हातमा भेटिने गर्छ । विद्वान मानिसको अलावा अरु धेरैको हातमा पनि यस्तो रेखा भेटिने गर्छ । यो भनिएको छ कि हातमा एक्स लाइन एक लोकप्रिय व्यक्ति वा ठूलो चीजको लागि जन्मिएको व्यक्तिको हातमा देखा पर्ने गर्छ ।
यसबाहेक, यो एक्स एक हातमा मात्र हुने व्यक्तिको पनि भाग्य चम्कियको हुन्छ । धेरै विद्वानहरूले यो प्रतीक अलेक्जेन्डरका हातमा फेला परेका छन् र यसबाहेक, यस्तो चिह्न हिटलर, महात्मा गांधी, सम्राट अशोकको हातमा पनि भेटिएको थियो। यस्तो अवस्थामा, यदि एक्स तपाईंको हातमा पनि छन् भने, तपाईं पनि भविष्यको भाग्यशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, असार ०७, २०७५२०:११
भोलि निर्जला एकादशी ! हरेक मनोकामना पूरा गर्नको लागि अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय !